माधव नेपालले ‘बी’ माले भनेकै भोलिपल्ट गर्जिए ओली, बोल्दाबोल्दै आक्रो*शित, आयो कडा जवाफ (भिडियो हेर्नुहोस) – Onlines Time
माधव नेपालले ‘बी’ माले भनेकै भोलिपल्ट गर्जिए ओली, बोल्दाबोल्दै आक्रो*शित, आयो कडा जवाफ (भिडियो हेर्नुहोस)
March 24, 2021 onlinestimeLeaveaComment on माधव नेपालले ‘बी’ माले भनेकै भोलिपल्ट गर्जिए ओली, बोल्दाबोल्दै आक्रो*शित, आयो कडा जवाफ (भिडियो हेर्नुहोस)
सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै ‘कम्पनी’ मार्फत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोकिने जानकारी दिए। यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जग्गा किन्ने, बिक्री गर्ने मान्यता प्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न पाउने छैनन्।
‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए घरजग्गा किनबेच हुँदा हुने अनियमितता रोकिनेछ’, उनले भने। भूमि बजार कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। ‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहने या छुट्टै निकाय रहने वा त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने।
भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। भूमि बजारका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर थप अध्ययन गरिरहेको छ। जग्गा खरिद बिक्रीमा दलाल प्रवृत्ति निकै हाबी छ। उनीहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्नुका साथै राजस्व पनि चुहावट भइरहेको छ।
अब जग्गा किन्न र बेच्न इच्छुक व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधिकारिक संस्थामा जानुपर्छ। खरिदकर्ताले आफूलाई पायक पर्ने र मनपर्ने स्थानमा सहजै जग्गा खरिद गर्न पाउनेछन्। बिक्री गर्ने व्यक्तिले पनि उक्त निकायमार्फत सहजै जग्गा बिक्री गर्न सक्छन्। अहिले घरजग्गा व्यवसायीले खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुवैबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्।
उनीहरूले जग्गाको मूल्यअनुसार सरकारलाई समेत राजस्व तिर्दैनन्। अब सरकारी मान्यता प्राप्त निकायबाट जग्गाको कारोबार गर्दा हुने ठगी रोकिनेछ। मन्त्रालयले अनलाइनबाटै जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बिक्री गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत विवरण वेभसाइटमा राखिन्छ।
खरिदकर्ताले मन परेमा उक्त अनलाइनमार्फत नै खरिद गर्न सक्छ। यसरी खरिदबिक्री गर्दा देशभरको जग्गा कारोबारको तथ्यांक राख्न सजिलो हुनेछ। पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायी संगठित भएर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन्। कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा कारोबारको संख्या कम देखिए पनि सरकारलाई राजस्व बढी प्राप्त हुन्छ। घरजग्गा व्यवसायी विशाल सुवेदीले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा व्यवस्थित हुने बताए।
‘कम्पनीले राज्यलाई राजस्व पनि तिर्ने भएकाले निकाय खडा हुँदा राम्रो हुन्छ’, उनले भने। अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरे किन्ने, बिक्री गर्ने र मध्यस्थ गर्ने सबैलाई सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् ।
मेरो क्या*न्सर लागेको बुवालाई ठिक पार्दिनुस् बरु हामी भोकै बस्छौ ,कठै छोरी (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खरै हेर्नुस सानो बा’लकलाई छो’डेर कमला बि’दा भइन! वुवा आमा पहिलो पटक रु*दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस)
यति सानि राम्रि नानिलाई यस्तरी बा’धेर राख्छिन आ’मा ,आखिर किन ? (भिडियो हेर्नुस् )
March 15, 2021 March 15, 2021 onlinestime
अन्ततःसपना र महाबिरलाई पूर्वमन्त्रीको हातबाट लाखौंको सहयोग,मन्त्रीकै अगाडी सपनाको कडा गर्जन Sapana
December 14, 2020 December 14, 2020 onlinestime
सपनाले विनय बिरुद्ध प्रहरि जाहेरि दिए लगत्तै सपनामाथिनै मुद्दा लगाईयो (हेर्नुस् भिडियो)
February 15, 2021 February 16, 2021 onlinestime